Kedu ka Julius si na-abawanye ROI nke Marketing Influencer | Martech Zone
Thursday, June 15, 2017 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Jason Shuman
Luzụ ahịa Influencer bụ ụdị ngwa ahịa na-eto ngwa ngwa n'ịntanetị. Enwere ezigbo ihe kpatara ya-data ndị na-adịbeghị anya gosipụtara ROI nke mgbasa ozi ahịa influencer: Elekere iri asatọ na abụọ nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịgbaso ndụmọdụ nke onye na-eme ihe ọ bụla mere na $ 1 niile e mefuru n'ahịa ahịa na-alaghachi $ 6.50 Ọ bụ ya mere ngụkọta ahịa ahịa influencer ji eme atụmatụ ka site na $ 1 ijeri na $ 5-10 n'ime afọ ise na-esote.
Mana, ruo ugbu a, ịme mkpọsa mgbasa ozi na-akpali akpali na-agwụ ike, usoro na-ewe oge. Nke mbu, ikwesiri ichoputa ihe omuma banyere ndi mmadu ka imeputa ihe ndetuta nwere ike bụrụ ihe dị mma maka ika gị. Mgbe ahụ, nnyocha ahụ na-abịa iji chọpụta ndị bụ ndị na-eso ụzọ ya, ụdị aha ndị ọzọ ọ zigara maka, kedu ụgwọ ga-efu kwa post, yana otu esi akpọtụrụ onye a. N'ikpeazụ, ị setịpụrụ nsuso na usoro iji tụọ mmetụta nke mkpọsa gị. Nke a mechara bụrụ oge niile, ọrụ ebupụtara na ngwa ahịa maka ahịa.
Julius bụ ngwanrọ ngwanrọ maka ụdị na ụlọ ọrụ ịmalite mkpọchi ntụgharị na-aga nke ọma ma nwee ọganiihu. Julius na-enye ngwa ọrụ ịchọrọ iji nyochaa ndị na - eme ihe ike, rụọ ọrụ ma jikwaa mmekọrịta gị, ma nyochaa data niile n'otu ebe. Ọ na-echekwa oge bara uru, ike, ma na-enye ezigbo oge iji malite usoro azụmaahịa influencer na-aga nke ọma.
Mụ na Julius, ị nwere ike:
Ozugbo nweta data zuru ezu nke onye ahịa na-azụ ahịa chọrọ iji mee mkpebi doro anya banyere onye nwere ike ịmepụta ma gosipụta ụdị ha. Chọpụta akụkọ n'ezie na ndị na-eme ihe nchịkwa 50,000 +. Guo akwụkwọ akụkọ ọhụụ banyere onye na-emetụta ihe, lee ụzọ izizi ọdịnaya ya, ma nweta data zuru ezu na igwe mmadụ. Nwekwara ike ịhụ nnweta mmetụta na itinye aka metrik maka netwọ mmekọrịta mgbasa ozi itoolu.
Chọta onye na-eme ihe ziri ezi dabere na isi ihe data micro. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọta onye nwere nnukwu ma tinye aka na Midwest, agụụ maka ịpụ na ịlele nke ọma n'ime mmefu ego gị? Nwere ike ịchọ ya. Chọrọ ịhụ onye akara asọmpi na-eji? Nwere ike ịchọ nke ahụ, kwa. Julius na-enye data gafere elu elu.
Tụlee influencers iji mee mkpebi ngwa ngwa, gụrụ akwụkwọ. Ntụle nke otu n'akụkụ na-ele ihe niile gbasara gị, tinye, ma kwurịtakwa ndị nwere ike ime ihe n'otu ebe.
Enweghị oku ọzọ. Malite mkparịta ụka, nweta ozi kọntaktị, ma soro nkwukọrịta n'otu ebe.
Mee ka ndi otu niile sonye. Mfe jikwaa mkpọsa gafee ìgwè na mkparịta ụka na mkpọsa ọganihu visibiliti. Soro mkpọsa ndị ọrụ ibe gị iji hụ ihe na-arụ ọrụ.
Omume Kachasị Mma Marketingzụ ahịa
Re ahịa azụmaahịa na-enyere ụlọ ọrụ aka ịkọrọ ndị na-ege ha ntị ozi ziri ezi. Ijikọta nkà ihe ọmụma kwesịrị ekwesị na ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị nwere ike ime maka mkpọsa ndị dị ịrịba ama mgbe niile na otu ha nwere ike isi nwee isi ma na-efu ọnụ. Mark Gerson, onye isi oche nke Julius.
Bestfọdụ omume kacha mma gụnyere ndị a:
Chọta ezigbo influencer maka ozi gị. Successfulzụ ahịa influencer na-aga nke ọma abụghị naanị maka inwe ndị ama ama na ngwaahịa gị ma ọ bụ nye otuto ụgha banyere ọrụ gị. Ọ bụ maka ịkọwapụta akara ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị n'ụzọ nke ọma na nke na-emetụta ndị na-ege ntị. Ndewo ohuru ohuru nke kpakpando Audrina Patridge dika onye na-aru oru, ohuru ohuru iji gosiputa nri ha n'ime igbe. She Instagrammed na inwe enyemaka iji nweta nri dị mma na tebụl ngwa ngwa bụ azịza dị ịtụnanya maka ya na ndị nne ọhụụ ọ bụla nwere obi ọjọọ n'ebe ahụ na-eche banyere isi nri. Ihe ahụ na-arụ ọrụ.
Cheta, iguzosi ike n'ezi ihe bụ ihe niile. Imirikiti ndị na-azụ ahịa dị mma na akwụkwọ nkwado ma ọ bụrụhaala na ọ na-adịgide na uru nke ika ahụ. Dika Tara Marsh nke Wunderman siri kwuo na puta Julius na-abia, ahia ndi mmadu di na ya abughi ihe kariri ebe obu na Royal Family kwadoro nke oma Wedgewood China otutu otutu afo gara aga! Dị nnọọ ka ezinụlọ Royal bụ ezigbo onye na-agbanwe agbanwe nke ezigbo china, onye nwere ike ịhọrọ nke ọma nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti akara ogologo oge - dịka, n'etiti ọtụtụ ihe atụ, Nike gara n'ihu na Michael Jordan. Ọnụnọ nke mmekọrịta azụmahịa n'etiti akara na onye na-emetụta ihe adịghị mkpa maka mkpọsa nke mkpọsa - nke a kpebiri site na nhọpụta nke onye na-emetụta ya na nnwere onwe okike o nwere.
Bụrụ onye na-emekọ ihe ọnụ. Nwee ọhụụ ọhụụ maka mkpọsa ahịa ahịa gị, mana mepee ka gị na onye na-emetụta gị rụ ọrụ na asụsụ ma ọ bụ foto ị ga-eji. Ha maara ndị na-ege ha ntị nke ọma ma mara ihe ga-abụ echiche kacha mma nke ga - eme ka ọ bụrụ ọkwa na - aga nke ọma. Na Podcast Julius na-abịanụ, Brittany Hennessy nke Hearst na-ekwu maka "Nnwale Nlere Dị Ọcha." A ika ekwesịghị ịjụ ihe influencer na-ekwu, “squeaky ọcha” - ma kwesịrị kama inye influencer okike ikike ime ka nke ahụ n'ụzọ ọ bụla bụ ihe kasị ezigbo ya na anabata ya na-ege ntị.
Akụkọ Successga nke Ọma Mgbasa Ahịa
Julies bụ ihe ngwọta kachasị dị irè ma dị irè maka obere na nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ike ịhapụ ọnụọgụ isi maka njikwa akwụkwọ ntuziaka nke mgbasa ozi mmetụta.
Na mbụ, anyị ga-adabere na naanị Googling ka ịchọọ ndị na-eme ihe ike na ịgakwuru akụkọ mgbasa ozi ha n'otu n'otu iji chọta ozi. Julius bara ezigbo uru. Meghan Catucci, Ọdịnaya Strategist na AOL / Huffington Post
E wezụga ịchekwa oge na ike mmadụ, Julius na-emekwa ka ikike onye na-ere ahịa rụọ ọrụ, nwalee, ma weghachite ya na ọtụtụ ndị na-eme ihe ike n'otu oge iji chọta ROI kacha mma maka mkpọsa gị. Maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi 'Google Photos, ha goro ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu ka ha tinye ndị na-ege ha ntị ka ha gbasaa ozi na Google Photos bụ ụzọ kachasị mma na kachasị mfe iji chekwaa, chọọ, na katalọgụ foto, na-eji hashtag #easythrowback. Ikike ịkọchi ma mechie ọtụtụ azụmahịa n'otu oge site na iji Julius chekwaa oge ụlọ ọrụ oge ọrụ.
Anyị enweela ọganiihu ịga nke ọma n'iji ikpo okwu, na-eme ọtụtụ ihe na-emegharị ahụ ozugbo. Bill Meara, onye isi oche nke Access Sports Media.
Gbalịa Julius maka Onwe Gị!
Tags: mmetụtainfluencernjikọ akaahịa ahịainfluencer ahịa roiinfluencer irujuliuslaghachi azụmaahịaROI
Jason bụ onye isi ndị ọrụ na Julius, Platform Marketing Influencer. Jason bụ onye ọchụnta ego na VC nwere ahụmịhe na ahịa eCommerce na-azụ ahịa, mmalite ahịa abụọ na SaaS. Jason nwere obi ụtọ iso ndị na-achọ idozi nsogbu ma nye azịza bara uru.